လက်ရှိမှာ Instagram အသုံးပြုတဲ့သူ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ? -
Instagram ကတော့ Visual ကိုဦးစားပေးတဲ့ Brand တွေ၊ Business တွေရဲ့ အသုံးပြုလာခြင်းကို ခံရတဲ့ Social Media Platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကပဲ လူငယ် Audience ကလည်း သူတို့ရဲ့ Activities တွေကို ဖော်ပြချင်တဲ့အတွက် Instagram ကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Audience တွေက Social Media Platform တွေကိုအသုံးတော့ပြုနေကြတဲ့ ကိုယ်နဲ့ အတူ အသုံးပြုနေတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိနေလဲဆိုတာကိုတော့ သတိမထားမိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် Instagram ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ အသုံးပြုသူ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီးလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
Instagram မှာအသုံးပြုသူ ဘယ်လောက်ရှိလဲ?
Instagram ကိုလက်ရှိအချိန်ကာလမှာ လစဥ်အသုံးပြုနေတဲ့ အသုံးပြုသူအရေအတွက်ဟာ ၁ ဘီလီယံ ရှိနေပါပြီး နေ့စဥ်အသုံးပြုတဲ့ အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကတော့ ၅၀၀ မီလီယံ ရှိပါတယ်။ အခု ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ Instagram Platform ကိုအသစ်လာ Join တဲ့အသုံးပြုသူ အရေအတွက်ဟာဆိုရင်လည်း ၂၆.၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။
Instagram ကိုယောက်ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ဘယ် Gender ကပိုများလဲ?
မိန်းကလေးတွေက Instagram ကို ပိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးက ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားတွေကတော့ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်း အသုံးပြုပါတယ်။
Instagram ကိုဘယ်သူတွေ အများဆုံး အသုံးပြုကြလဲ?
Instagram ကို လူငယ်တွေအသုံးများပြီး အသက်ရွယ် အပိုင်းအခြားအရ ၁၈ နှစ် နဲ့ ၃၄ နှစ် ကြားမှာ ရှိပါတယ်။ Instagram အသုံးပြုတဲ့ သူတွေထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံး အသက်အရွယ် အပိုင်းအကြား ကတော့ ၂၅ နှစ်နဲ့ ၃၄ နှစ်ကြား ဖြစ်ပါတယ်။
Worldwide မှာကော Instagram အသုံးပြုသူ ဘယ်လောက်ရှိလဲ?
လက်ရှိ Instagram ကိုအသုံးပြုသူ ၁၁၅ မီလီယံနဲ့ US ကဦးဆောင်နေပါတယ်။ ဒုတိယကတော့ ၇၃ မီလီယံနဲ့ ဦးဆောင်နေပါတယ်၊ နောက်ထပ်နိုင်ငံတွေကလည်း ဘရာဇီးလ်က ၇၂ မီလီယံ၊ အင်ဒိုနီးရှာက ၆၀ မီလီယံနဲ့ ရုရှားက ၄၂ မီလီယံ အသုံးပြုသူတွေ ရှိကြပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ၂ လလောက်မှာပဲ အသုံးပြုသူက ၂၆.၉ ရာခိုင်နှုန်း အထိများပြားလာတာကိုတွေ့ရပြီး၊ နောက်ပိုင်း အချိန်ကာလတွေမှာ ဘယ်လောက်ထိ အသုံးပြုသူများလာမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Monday February 10th, 2020/ Blog/0Comment